Maqaalo | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maqaalo	Dhageyso Qeybtii Ugu Dambeysay Barnaamijka Qisatul Andalus (Q-24-aad)
War baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa soo gabagabeysay barnaamijkii taxanaha ahaa ee Qisatul Andalus oo soo bilowday horraantii bishii Ramadaan, iyadoo uu barnaamijku si qoto dheer u sawiray furashadii ay Muslimiintu furteen Andalus illaa dhicitaankeedii. Ujeedada aanu xilligan isugu hawlnay ka hadalka taariikhda Andlalus ayaa waxay ahayd inaan ummada dib ugu bidhaamino taariikhdeedii iyo awoodeedii, waxa kale oo ay ...	Read More »
Sh/hoose oo Si Wanaagsan Looga Ciiday (Sawirro+Dhageysi)
Degmooyinka iyo degaanakada wilaayada islaamiga ah ee Sh/hoose ayaa maanta si wanaagsan looga ciiday marka laga reebo meelaha ay joogaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda. Bulshada ku hoos nool maamulka islaamiga ah ayaa ku ciideystay amni iyo nabad galyo, iyagoo sidoo kale oogay shacaa’irta kuna dukaday fagaarayaal waaweyn. Fagaare walba ayaa waxaa bulshada loogu soo bandhigay khudbooyin muhiim ah, waaqicana ...	Read More »
Maamulka Alfurqaan oo Muslimiinta ugu Hanbalyeeyay Ciidul Fidriga.
Maamulka iyo shaqaalaha war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxay hambalyo u dirayaan dhammaan ummada Muslimka ah meel walboo ay dunida ka joogto gaar ahaan dadka ku xiran mareegta, youteup-ka iyo baraha kale ee idaacadda. “Walaalahayaga Muslimiinta ahow waxaan idin leenahay Alle hay naga wada aqbalo acmaashii wanaagsanay ee aynu soo sameynay, waxaana Allaah ka baryeynaa in ummada Muslimka ah ...	Read More »
Dhagayso Barnaamijka Qisatul Andalus Qeybta 23-aad.
Dhagayso Barnaamijka Qisatul Andalus Qeybta 22-aad.
Dhagayso Barnaamijka Qisatul Andalus Qeybta 21-aad.
Dhagayso Barnaamijka Qisatul Andalus Qeybta 20-aad.
Dhagayso Barnaamijka Qisatul Andalus Qeybta 19-aad.
Dhagayso Barnaamijka Qisatul Andalus Qeybta 17-aad.
Wax kabaro dagaalladii waaweynaa ee Muslimiintu la galeen Gaalada.(17)
Furashadii Jaziiradda Roodos oo ahayd Saldhig muhiim u ahaa Ciidankii Badda ee Islaamka. Marka laga hadlo arimaha badda kuma ahan Muslimiintu wax ay waaya dhow barteen, balse waxay u leeyihiin Taariikh soo jireen ah, taas oo muujineysa sida uu Islaamku u danneeyo arimaha Milleteriga. Xilligii khilaafada Cumar ayaa waaligii Shaam Mucaawiya bin Abii Sufyaan waxa uu ka codsaday Cumar inuu ...	Read More »
Page 1 of 612345	»	...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan